Dhaqaalahaada Ayaad Ku Ciyaareysaa Hadii Aad Lacag Keydiso! | Xaqiiqonews
Dhaqaalahaada Ayaad Ku Ciyaareysaa Hadii Aad Lacag Keydiso!
Waxaa uu ka shaqeynaayey Banki inta ugu badan noolashiisa, laakiin ugu dambeyn sirtan ayuu la wadaagay dadka “hadii aan nahay shaqaalaha bankiyada ka shaqeeya waan ku qosolnaa dadka “lacagta nagu keydsada”.
Hadii aad ka mid tahay dadka lagu soo barbaariyey fikradda “Keydka waa fiicanyahay”, khubarada dhaqaalaha iyo bankiyada waxa ay ku leeyihiin fikradaasi mar walbo sax ma ahan.
Marka aad maqasho “Keydka ma fiicno” macnaheedu ma ahan lacagtaad ku tumo oo iska gub dhamaan mushaarka aad qaadato, waxa aan halkani kugu soo gudbinayaa fikrad aysan jecleen Bankiyadu in laguu sheego.
Maalgelinta waxa ay khubarada afka ingiriiska ku sheegaan stress less and work less taasi oo af-soomaali ahaan lagu sharxi karo “jiq iyo jiif”, (ma ahan talo maaliyadeed).
Muhiimadda Ma ahan Meeqaad Sameysaa
Dad badan ayaa lacag malaayiin ah sameeyey, dabcan maalmo ayeyna ku lumiyeen, tusaale aan u soo qaadano ciyaaryahanada, iyo dadka ku guuleysta waxa loo yaqaan lottery (Nasiibka).
Sidoo Kale Aqri..Sidee Ku Noqon Kartaa Hantiile Wax Ka yar Sanad Gudihiis?
Dhaqaalayahanada waxa ay marxaladda lacag sameynta ku magacaabaan “Wax fudud oo la fahmi karo”.
Muhiimadda Ma ahan Meqaad Keydisaa
Hadii aad daba raacdo silsiladda dheer ee ah “lacag sameey ka dibna keydi”, markaasi kuma socotid meel wanaagsan, qeybta hoose waxaa ku qoran sirta dahabiga ee loo baahanyahay in uu ogaado qof walbo oo rabo in uu sameeyo lacag badan.
Lacagta ha u shaqeynin, iyadu ha kuu shaqeyso
Sirtu waa “meeqaad maalgelisay”, macnaha hadii aad maalgeliso lacagta waxa aad lacagta ka dhigtay mid iyadu kuu shaqeyso, sanduuqa ugu fiican ee khubarada ku taliyaan in aad lacagtaada dhigato waa sanduuqa “maalgelinta”.
Ugu dambeyn- maalgelinta lacagta kama dhigna “maalgeli, ka dibna iska maalo”, qaabka ugu fiican ee lacag loo maalgeliyo waxa ay tahay in aad barato halkii aad lacagta ku maalgelin laheyd iyo sida aad u maalgelin laheyd.